Deportations Archives – Nehanda Radio
Apr 15, 2020 48,684
Zimbabweans in South Africa whose visas or days expired during the Covid-19 lockdown period will not be arrested or deported for violating the neighbouring country’s immigration laws.
Nov 15, 2016 371
By Thupeyo Muleya Thirteen Zimbabweans were injured, one of them seriously, when a South African Home Affairs Ministry truck they were travelling in during deportation overturned near Musina on Thursday afternoon. The incident…
Sep 2, 2012 517
Aug 21, 2012 571
Detainees at the Lindela Repatriation Centre in South Africa are claiming that 4 people, including 2 Zimbabweans, one Malawian and another unknown national, have died since a riot at the facility on the 13th August.
Mar 6, 2012 389
Oct 13, 2011 358
South Africa yesterday deported 261 Zimbabweans who were living in that country illegally while 300 more such immigrants are expected to arrive at Beitbridge Border Post today. This follows the expiry of the July 31 deadline for them to…
Dec 13, 2010 165
Aid agencies are braced for a “mass return” of illegal Zimbabwean migrants from South Africa. A moratorium on deportations, introduced in 2009, expires on Dec. 31. The Harare government's contingency plans are based on receiving an…
SA to resume deportation of Zimbabweans
Sep 2, 2010 182
Cape Town – The South African Cabinet has approved a proposal to end the special dispensation for Zimbabwean nationals introduced in April 2009, government spokesman Themba Maseko said on Thursday. This followed a bilateral agreement…
Deported Zimbabwean war vet sent back to UK
Aug 21, 2010 661
A 50 year old Zimbabwean war veteran deported to South Africa by UK immigration authorities on the 11th of August this year was swiftly returned back to the United Kingdom following legal intervention. Nelson Ngwenya otherwise known as…
Jul 4, 2022 34,790
Jul 4, 2022 26,202